erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူယောက်ျား 1,022 အတွက် endocrine စိစစ်: လက်တွေ့အရေးပါမှုနှင့်ကုန်ကျစရိတ် - ထိရောက်သောမဟာဗျူဟာ (1997) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်
လက်တွေ့အရေးပါမှုနှင့်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောနည်းဗျူဟာ (1,022): erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူ 1997 ယောက်ျားအတွက် endocrine စိစစ်
J ကို Urol ။ 1997 Nov;158(5):1764-7.
Buvat J ကို, Lemaire တစ်ဦးက.
Lille, ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ L'Etude de la Pathologie de l'Appareil မျိုးဆက်ပွားနှင့်စိတ်ဝိဥာဉ်စိတ္တဗေဒပညာရှင်များအသင်း။
ကျနော်တို့ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သော endocrine စိစစ်နှင့်ဖို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသနျ့ရန်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစာမေးပွဲ၏ရလဒ်ဖြစ်သောကြောင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ရည်ညွှန်းခြင်းနှင့်သမိုင်းနှင့်အတူဒေတာနှိုင်းယှဉ် 1,022 လူနာ endocrine ကုထုံး၏အခြား etiological စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများသွေးရည်ကြည် Testosterone နဲ့ prolactin ပြဌာန်းခွင့်၏ရလဒ်များကိုပြန်လည်သုံးသပ် ဟော်မုန်းမူမမှန်များအတွက်အမှန်တကယ်တာဝန်အတိအကျရှာရန်။
Testosterone နဲ့ prolactin radioimmunoassay ကဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ တိုင်းစိတ်ရှည် testosterone ဟော်မုန်းအဘို့အပြခံခဲ့ရခြင်းနှင့် 451 လျော့နည်း4ng./ml ထက်နိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, gynecomastia သို့မဟုတ် testosterone ဟော်မုန်းများ၏အခြေခံပေါ်မှာ prolactin အဘို့အပြခံခဲ့ရသည်။ ပြဌာန်းခွင့်မူမမှန်ပထမဦးဆုံးရလဒ်အမှု၌အကြိမ်ကြိမ်ခံခဲ့ရသည်။ Prolactin ရလဒ်များကို erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်စနစ်တကျ prolactin ပြဌာန်းခွင့်နှင့်အတူ 1,340 လူနာတစ်ဦးသည်ယခင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆောင်များတွင်သူတို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။ ဟော်မုန်းပြဌာန်းခွင့်အတွက်ထိရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. စမ်းသပ်စစ်ဆေးပင်မလက်တွေ့သတ်မှတ်ချက်နိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, အသေးစားဝှေးစေ့နှင့် gynecomastia ခဲ့ကြသည်။ endocrine ကုထုံး testosterone ဟော်မုန်း heptylate သို့မဟုတ် hyperprolactinemia များအတွက် hypogonadism နှင့် bromocriptine များအတွက် human chorionic gonadotropin ပါဝင်သည်။
testosterone3ng./ml ထက်လျော့နည်းခဲ့သည်။ 107 လူနာပေမယ့်ထပ်ပြဌာန်းခွင့်မှာ 40% အတွက်ပုံမှန်။ အကြိမ်ကြိမ်အနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းများ၏ပျံ့နှံ့မှု (အသက်4နှစ်နှင့် 50%9နှစ်သို့မဟုတ်အဟောင်းတွေမတိုင်မီ 50%) အသက်အရွယ်နှင့်အတူတိုးတက်လာခဲ့သည်။ နှစျခု pituitary မြင်းသရိုက်အနာ testosterone ဟော်မုန်းပြဌာန်းခွင့်ပြီးနောက်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ အခြားအနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်အများစုဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပုံမှန်သွေးရည်ကြည် luteinizing ဟော်မုန်းနှင့် prolactin ၏ nonorganic hypothalamic ကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေဖြစ်ပေါ်ပုံနှင့်အန်ဒရိုဂျင်ကုထုံးပြီးနောက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုသာသေးငယ်တဲ့အခန်းကဏ္ဍ 16 သာ 44 အတွက် (အဓိပ္ပါယ်တိုးတက်မှု [36%] ရှိသည်ဖို့, ပုံမှန်နံနက် သို့မဟုတ် 30% အတွက် nocturnal စိုက်ထူခြင်းနှင့် 42% အတွက်အဓိပ္ပါယ် vasculogenic ပံ့ပိုးမှုများကို) ။ သာအနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒသို့မဟုတ်ပုံမှန်မဟုတ်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစာမေးပွဲ၏ကိစ္စများတွင် testosterone ဟော်မုန်းအဆုံးအဖြတ်နောက်ပိုင်းတွင်အန်ဒရိုဂျင်ကုထုံးအားဖြင့်တိုးတက်သူတို့၏အမျိုးအ 40% အပါအဝင်အနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းနှင့်အတူဖြစ်ပွားမှု 37% လွဲချော်ခဲ့ကြပေသည်။ Prolactin 20 ng./ml ကျော်လွန်သွား။5ယောက်ျားနှင့်ထပ်ပြဌာန်းခွင့်မှာ2အတွက်ပုံမှန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သာ 1 prolactinoma ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကား data တွေကိုကျနော်တို့ကနောက်ဆုံး2ဆယ်စုနှစ်ကာလအတွင်းတွေ့ရှိခဲ့များထက်နိမ့်များမှာ (20 ng./ml ထက် prolactin သာ. ကြီးမြတ်ခြုံငုံ။ 1.86 လူနာ 1,821%,7အတွက် prolactinomas, 0.38% အတွက်) ။ Bromocriptine ကျိန်းသေ 35 ng./ml ထက် သာ. ကြီးမြတ် prolactin နှင့်အတူကိစ္စများတွင်ထိရောက်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ (8 ၏ 129နှင့် 22 ng./ml အကြား prolactin နှင့်အတူသာ 20 35 ၏ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ ) ။ testosterone 50 ng./ml ထက် သာ. ကြီးမြတ် prolactin နှင့်အတူဖြစ်ပွားမှု 35% ထက်လျော့နည်းအတွက်အနိမ့်ခဲ့သည်။
erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်အနိမ့် Testosterone နဲ့မြင့်မားတဲ့ prolactin ၏အနိမ့်ပျံ့နှံ့နေတဲ့နှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများဟာသူတို့ရဲ့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ပြဌာန်းခွင့်ကိုအပြစ်လွတ်မရပါဘူး။ သို့သော်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောစိစစ်မဟာဗျူဟာများယခုအချိန်အထိ endocrine ကုထုံးနှင့် pituitary ကင်ဆာနှင့်အတူတိုးတက်ဖြစ်ပွား% 40 မှ 50 လွဲချော်အကြံပြုခဲ့သည်။ ယခုကြှနျုပျတို့အသက်အရွယ် 50 နှစ်ပေါင်းမတိုင်မီ testosterone ဟော်မုန်းသာအနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစာမေးပွဲ၏ကိစ္စများတွင်ဒါပေမယ့် 50 နှစ်ပေါင်းထက်အသက်ကြီးတဲ့လူအပေါင်းတို့အတွက်တိုင်းတာမည်အကြောင်းဆုံးဖြတ်ကြောင်းထောက်ခံ။ Prolactin သာအနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, gynecomastia နှင့် / သို့မဟုတ်4ng./ml ထက်လျော့နည်း testosterone ဟော်မုန်း၏ကိစ္စများတွင်ဆုံးဖြတ်ထားရပါမည်။